New Year Promotion - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Promotion > New Year Promotion
MSI ချစ်သူများ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်တွင် စီးပွားလာဘ်လာဘများ ပေါကြွယ်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
MSI Notebook ၀ယ်ယူမည့် MSI ချစ်သူများအတွက်လည်း Happy New Year Superior Promotion ကို လုပ်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
သတ်မှတ်ထားသော Promotion ကာလအတွင်း MSI Gaming Notebook များဝယ်ယူပြီး အထူး Cash Back များနှင့် လက်ဆောင်များ ရရှိနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ။
Promotion ကာလကို (1st Jan ~ 31st Jan 2019) ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့ မှ (၃၁)ရက်နေ့ အထိ လုပ်ပေးထားပါတယ်။
*MSI 8th gen GT / GS နှင့် GE Gaming Series Notebook ၀ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ~
Superior cash back US$ 200 နှင့် US$ 80 တန်ဖိုးရှိသည့် အထူးလက်ဆောင် ပစ္စည်း များဖြစ်သော Gaming Headset + String Bag + Dragon Doll (middle) ပါဝင်သည့် Loot Box အကြီး အပြင် Gaming Backpack ကို လည်း ရရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
*MSI 8th gen GP Gaming Series Notebook ၀ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ~
Superior cash back US$ 150နှင့် US$ 60 တန်ဖိုးရှိသည့် အထူးလက်ဆောင် ပစ္စည်း များဖြစ်သော Gaming Mouse + Dragon Mouse pad + Dragon Doll (Charm) ပါဝင်သည့် Loot Box အသေး အပြင် Gaming Backpack ကို လည်း ရရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
*MSI 8th gen GL နှင့် GF Gaming Series Notebook ၀ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ~
Superior cash back US$ 100 နှင့် US$ 60 တန်ဖိုးရှိသည့် အထူးလက်ဆောင် ပစ္စည်း များဖြစ်သော Gaming Mouse + Dragon Mouse pad + Dragon Doll (Charm) ပါဝင်သည့် Loot Box အသေး အပြင် Gaming Backpack ကို လည်း ရရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
*** မှတ်ချက်။ ။ လက်ဆောင်များမှာအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အမြန်ဝယ်ယူအားပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။ ထို့အပြင် လက်ဆောင်များကို ငွေသားနှုင့် ဈေးဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။
ဒါ့အပြင် Special Game Bundle online redeem program တွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသော model အလိုက် ၀င်ရောက်လျှောက်ပြီး ရယူနိုင်ပါပြီ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန် အောက်ပါ link များတွင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ…
*** MSI Product များကို Royal Smart Co., Ltd မှ တရားဝင် ဖြန့်ချိပေးပြီး
MSI Laptop များကို အောက်ပါဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Yangon – Technoland(36th Street / Hledan Center / Tamine / U Chit Maung ) , I.C.E (Lanmadaw-Hledan) , Citicom (Bar Street / SeikKhamThar) , KMD (Pansoedan / Myaynigone) , Splendid (35th Street) , Unique (SeikKamthar/ Pansoedan / Hlaing / Tamwe ,etc…) , Innwa (38th Street / SeikKamthar) , Smart (36th St.) , A Plus (SeikKhamthar) , Essential(SeikKhamthar), Eastern(SeikKamthar/Hlaing/Kabaraye) , B2HD (MingalarTaungNyut) , Evo Store (Lapyaewon Plaza) , Banana IT shop(Myanmar Plaza ) , Electronic City (South Oakalapa) , Alpha Trion (Mingalar Taunggyut) , EVO Store
*** Mandalay – Technoland , My Com , MAT , Innwa , Nomad’s Data Hub , Titanium Rose (TIR)
*** Naypyitaw – Smart Computer , Linn IT & Solution
*** Taunggyi – Nay Myo ကွန်ပျူတာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ TEQ Computer , Root Mobile
*** Lashio – MST computer ,
*** Mawlamyaing – Ocean (Technoland Computer) ၊ MCC Computer ၊ Double-Y Computer
*** Beik – Sun Computer ၊ Update Computer
*** Magway – ရွှေဧရာ Computer
MSI Laptop ၏ Warranty ကာလမှာ2Years Part &3years Service Warranty ( but Battery and Power Adapter – 1 Years Warranty) ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MSI Service & Showroom ကိုဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာအမှတ် ၁၅၈ ၊ ၃၆လမ်း အလယ်ဘလောက် ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁-၂၄၀၁၁၀ ၊ ၀၉-၄၀၄၈၈၂၂၇၇ (viber Hot Line) ၊ ၀၉-၄၄၃၀၂၀၉၈၁ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MSI Productများကို အစဉ်တစိုက်အားပေးဝယ်ယူကြတဲ့ customer မိတ်ဟောင်း ၊ မိတ်သစ်များကို MSI Gaming (Myanmar) မှ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ..
Posted by tntwebadmin
Transcend Rainy Season Promotion (Buy Ext-HDD Get Cash Back )
ဒီဇိုငျးမိုကျ အရညျအသှေးကောငျး အကွမျးခံတဲ့ Ext-HDD ဝယျမယျဆိုရငျ Transcend...
Perfect Desk Promotion
Laptop ကို သဘောမကဘြူး PC မှ PC...
View the Nature with Acer
အိမျမှာပဲသာသာယာယာ chill လို့ရမယျ့ အိမျတှငျး ရုပျရှငျရုံလေး ဖနျတီးဖို့.....
Aspire Rainy Sales Promotion
ဒီလို လအစ ရကျ ကို မြှျောတဲ့သူ ၃...
MSI June Promotion 2020
မိုးနဲ့အတူအေးမွခွငျးတှကေို ယူဆောငျလာပေးတဲ့ Juneလမှာ MSI Gaming ကလညျး...
GS75 Stealth 10SFS Core i9
Modern 14 A10RAS Core i7
Modern 14 A10M Core i5
GS75 Stealth 10SF Core i7 (RTX 2070 8GB) Gaming
GS66 Stealth 10SE Core i7 (RTX 2060 6GB) Gaming
SLN Group of Company was established in November, 2014 by incorporation of Shwe Lamin Nagar Co., Ltd. and Royal Smart Co., Ltd.
In 2003 Royal Smart Company became authorized distributor of Micro-star Inter- national (MSI) products of Myanmar market ; and also became Authorized Distributor for HP Consumer Product in 2013.
ACER Desktop Price List
ACER Monitor Price List
ACER Projector Price List
ACER Notebook Price List
Phone: 01-255655, 09-252229400, 09-252229500
Address:No(200,208), Room No(002) 35th Street(Upper Block) Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.